Mahad Cabiib oo 17 sanno ka dib laga yaabo in Noorweey laga masaafuriyo | Somaliska
Mahad Cabiib ah muwaadiin ay Noorwiijiyaanku ku sheegeen inuu asalkiisa yahay Jabuutiyaan ayaa qisadiisa soo jiitameeysay tan iyo sanadkii ina dhaafay, ka dib markii lugu eedeeyey inuu ka been sheegay soomaalidanimada uu sheegtay.
Mahad Cabiib, oo da’diisu tahay 30 jir ayaa dalka Noorweey yimid sanadkii 2000, wuxuu xilligaasi ahaa 14 jir aan heeysan aqoonsi . Sideed sanno ka dib waxaa uu qaatay dhalashada dalkaasi isagoona ka shaqeeya cisbitaal ku yaala magaaladda Oslo.
Bishii abriil ee sanadkii ina dhaaftay ayaa laanta jinsiyadaha iyo socdaalka waxaa ay kala laabatay dhalashadii dalkaasi uu horey u heeysta dalkana laga musaafurinayo, kadib markii ay sheegeen in aanu soomaali aheyn oo uu ka yimid dalka Jabuuti. Kiiska Cabiib oo maxkamadda sare loo gudbiyey ayaa dood iyo guux ka dhalisay dalkaasi. Haddii dembiga loo heeysto ee ah inaanu ka run sheegin aqoonsigiisa ayaa noqonaya shaqsi isaga qoyskiis aan heeysan aqoonsi ama dal laawe yaal. Inkastoo Noorweey sheegtay in uu yahay Jabuutiyaan hadana Jabuutiyaanku waxaa ay sheegeen inuusan u dhalan dalkooda. Mahad Cabiib oo u waramayey wargeyska VG ee ka soo baxa dalkaasi, ayaa sheegay in xaaladiisa ay la soo deristay jaha wareer tan iyo markii dowladdu sheegtay ineey dalka musaafurineeyso. Wuxuuse sidoo kale sheegay in uu doonayo in uu ku noolaado dalka Noorweey ah dal uu jecelyahay deganaantiisa una soo doonta nabad galyo.
Mahad Cabiib, waa muwaadin lugu eedeynayo inuu ka been sheegay halkii uu asal ahaan ka yimid. Wuxuu qarka u saaran yahay in dalka laga musaafuriyo.
Dhinaca kale haweeneyda lugu magacaabo Anne Kari Kollstrøm, oo ka tirsan laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dalkaasi ayaa sheegtay in kiiska Cabiib salka ku hayo arrimo badan oo ay ka mid yihiin baaritaano boolisku sameeyey iyo macluumaad dheeri ah oo ay heleen. Wasiiradda socdaalka dalkaasi haweeneyda looogu yeero Sylvi Listhaug, ayaa iyadoo dhinacadda ka jawaabeeysa dhaliilaha loo soo jeedinayo ku jawaabtay, waxaa ay hoosta ka xariiqday in Noorweey ay dhalashada kala laaban karto ciddii ka been sheegta aqoonsigooda ama qalad lugu helo. Balse kiiska Cabiib ay ku sheegtay sheeko in uu yahay mid sida cajiib ah.
Ugu dambeyntiina Mahad Cabiib ayaa sugaya jawaabta kama dambeynta ah ee looga arrinsanayo aayihiisa iyo mustaqabalkiisa, iyadoo maxkamadda sare ee dalkaasi maalinta jimcaha ee toddobaadkan rideeysa xukun noloshiisa mugdi gelisa ama iftiimisa, hase ahaatee wuxuu Mahad Cabiib ku rajo weeyn yahay in xaaladiisu hagaagi doonto taladana ay tahay tan Rabbi.
Sxb titleka iska sax! In la mastafuriyo markad ledahay adigu ma ki goanka goynayey bad tahay, walalka af iyo qoral iyo waxkasta inan ku tagerno bu naga istahila